1 2 3 4 5 6 ... 4481 Yehla
« Phendula #22: Februwari 11, 2008, 02:02:20 am »
Vele usho ukuthini mnumzane a_ysche wamukelekile nakuwe sithandwa
« Phendula #23: Februwari 11, 2008, 02:05:47 am »
Icashunwe ku: sinemm - Februwari 11, 2008 ngo-02: 00: 30 am
esma nguwe james bon?
007 noma okuthile kuye?
ihlaya, woza omuhle, kusasa udinga ukukholwa
Kwangathi uNkulunkulu anganipha ukuthula ... amaphupho amnandi ..
Ngeke ngilale namhlanje ebusuku ngingabhalanga lo myalezo.
Cha, angisona isibopho sikaJames ...
Ngingu-Esma 41 Bond um, 007 esikhundleni se-41 ....
Wozani, adios wonke umuntu ...
« Phendula #24: Februwari 11, 2008, 02:08:30 am »
« Phendula #25: Februwari 11, 2008, 02:08:32 am »
bye nami ngilele tschüß
« Phendula #26: Februwari 11, 2008, 11:11:41 am »
« Phendula #27: NgoFebhuwari 11, 2008, 03:56:42 pm »
Kuthiwani uma singafunda isiJalimane ngokuphelele lapho siqonda wonke amakhono olimi lwesiJalimane kule sayithi? noma i-bidet angiwatholi amagama ezenzi zesiJalimane nezinto kunoma iyiphi indawo. Ngibonga kakhulu uma usize isali yaba yilungu lale ndawo izinsuku ezimbili. msn wami ###@hotmail.com ngingajabula kakhulu uma uthumela amagama ezenzi zesiJalimane nezenzo njenge-imeyili ekhelini.Ngizibuza ukuthi ngingakunika yini kuzoba nzima kuwe kepha mina ' ngilinde i-CV yakho
« Phendula #28: NgoFebhuwari 11, 2008, 04:21:07 pm »
Angivumelani nebhokisi lodoti elihehisa ngempela, kepha kunalokho i-attic lapho ama-trinkets asala khona ngemuva. Kepha uma kukhulunywa into enhle lapha, kungaba yingxoxo kunokuba kungabi nalutho. woza lula manje ..
"Uma uzokhuluma ngayo, khuluma kanjalo ukuze ngikholwe,
Uma uzokhala, khala ukuze ngingathuli
Uma uhamba, khona-ke ngizokhohlwa ngokufa.
Kepha uma uzokuthanda ukuthunyelwa okunjalo,
Isihloko se- $ sanda & Aglatsanda & Lapho uhamba, ake ngikubeke enhliziyweni yami ....
« Phendula #29: NgoFebhuwari 11, 2008, 04:22:36 pm »
Ungathola izihloko eziningi ezingaba wusizo ekufundeni isiJalimane kuleli sayithi ... Ungasesha izihloko ozifunayo esigabeni sosesho. Funda ngokucophelela isigaba "solwazi lwesiJalimane" esithangamini. Ngokuqinisekile uzohlangana nolwazi olubalulekile mayelana nohlelo lolimi lapho ... Ungafunda i-perfekt yaseJalimane ngokufunda izihloko ezikulesi siza. Akekho ongakuqinisekisa lokhu kuwe. Kuhlobene nokunaka kwakho umsebenzi wakho kanye nekhono lakho lokufunda ... Kepha ngiyakutshela. Uma ufunda izifundo ezikulesi sayithi kahle impela, ngicabanga ukuthi uzohamba ibanga elide ekufundeni ... Ulimi alunakufundwa ngokufunda nokubhala kuphela. Ungalokothi ukhohlwe lokhu. Lalela ukusakazwa kweJalimane futhi uzijwayeze lolu limi. Iseluleko Esivela Kimi ...
Icashunwe ku: brueder - Februwari 11, 2008 ngo-03: 56: 42 pm
Kuthiwani uma singafunda isiJalimane ngokuphelele lapho siqonda wonke amakhono olimi lwesiJalimane kule sayithi? noma i-bidet angiwatholi amagama ezenzi zesiJalimane nezinto kunoma iyiphi indawo.Ngibonga kakhulu uma usize isihlalo saba yilungu lalesi siza izinsuku ezimbili. I-msn yami ayikho emthethweni. akukuphazamisi, kepha ngilinde i-CV yakho
« Phendula #30: NgoFebhuwari 11, 2008, 04:57:15 pm »
Icashunwe ku-: sevval - Februwari 11, 2008 ngo-04: 21: 07 pm
Yebo, futhi idinga ingxoxo ... ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukuvula isihloko esinjalo ...
« Phendula #31: NgoFebhuwari 11, 2008, 05:46:43 pm »
« Phendula #32: NgoFebhuwari 11, 2008, 05:51:57 pm »
1 2 3 4 5 6 ... 4481 Iya phezulu